အခြားဘာသာစကားများနှင့်နည်းပညာများ | အလုံးစုံတို့အဘို့အသုံးဝင်သောသတင်းအချက်အလက်များ
Photoshop မှာအရာဝတ္ထုများ၏အရောင်ကိုပြောင်းလဲနည်း ရုရှား menu ကို
Photoshop မှာအရာဝတ္ထုများ၏အရောင်ကိုပြောင်းလဲနည်း Photoshop မှာကောင်းပြီရုရှား menu ကိုအဘယ်သူမျှမတ္ထုကဲ့သို့သောရှိပါတယ်။ သင်အလွှာဆိုလိုလျှင်အလွှာနှင့်အတူ window ကို select လုပ်ပါ, အဲဒီနောက်, အဖြူရောင်နဲ့အနက်ရောင်-and စက်ဝိုင်းပေါ်မှာရှိကိုကလစ်နှိပ်ပါ ...
နောက်တဖန် Yandex အညွှန်း site ကိုအောင်ဘယ်လိုနေသလဲ?
နောက်တဖန် Yandex အညွှန်း site ကိုအောင်ဘယ်လိုနေသလဲ? လုံးဝနီးပါးဘာမျှမ Yandex သင်အညွှန်းကိန်းမှပထမဦးဆုံးလိုအပ်သည့်အတွက် site တစ်ခုလုပ်ချင်သောပြီးနောက်အချို့သောအချိန်သတ်မှတ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့: site ပေါ်တွင်သဘာဝလှုပ်ရှားမှုဖန်တီးရန်ပဌမလ, ဒါကြောင့် ....
အကြောင်းအရာအကြမ်းနှင့် vector ဂရပ်ဖစ်ပရိုဂရမ်ဥပမာပေးပါ။
raster နှင့် vector graphics programs တို့အားဥပမာပေးပါ။ Illustrator - vector photoshop editor, paint - raster ဤတွင်သင်ဟာပရိုဂရမ်အမျိုးအစားများကိုသာပေးနိုင်သည်။ Vector graphic editors MSO Visio, Sketsa SVG Editor / ...
ကုဒ် 740 မေတ္တာရပ်ခံစစ်ဆင်ရေးအဘယ်အရာကိုတစ်ခုတိုးလိုအပ်ပါတယ် ???
ကုဒ် 740 မေတ္တာရပ်ခံစစ်ဆင်ရေးအဘယ်အရာကိုတစ်ခုတိုးလိုအပ်ပါတယ် ??? ငါ *** မကျင့်ပေမယ့်ငါပဲဂိမ်းတစ်ခုဒါမှမဟုတ်သင် run ထားတဲ့ဗားရှင်းအဟောင်းကို windose များအတွက်ဒီဇိုင်းဖြစ်ကြောင်း program တစ်ခုကကူညီနိုင်ဘူး ...
ဘယ်လို Microsoft ကပါဝါပွိုင့်7အတွက်အဖြူရောင်နောက်ခံပုံရိပ်ကိုဖယ်ရှားပစ်ရန်ပြောပြ ??
Microsoft Power Point7ရှိအဖြူရောင်နောက်ခံကိုမည်သို့ဖယ်ရှားရမည်ကိုပြောပြပါ။ ?? ဒီ feature ကို "format" tab ကို, ပါဝါပွိုင့် 2010 ၌သာရရှိနိုင်ပါသည်။ မွမ်းမံခြင်းကိုမလိုချင်ပါက ...
ဘယ်လိုစက်ဝိုင်းထဲမှာ corelDRAW စာသား, ငါ့ကိုပြောပြပါကျေးဇူးပြုပြီးပါဘူး
ဘယ်လိုစက်ဝိုင်းထဲမှာ corelDRAW စာသား, ငါ့ကိုပြောပြပါဘူးစက်ဝိုင်းစက်ဝိုင်းပတ်လည်မှာတန်ပြန်လက်ယာရစ်အောင် delit.Kak စာသားကို click နှိပ်ပြီး select လုပ်ပါကျေးဇူးပြုပြီးနှစ်ခုယူ http: // dmi4er ။ ucoz ။ ru / publ / 5-1-0-11 သင်ကမည်သည့်ဆွဲ ...
ငါကီးဘုတ်ကနေဘယ်လို copy paste လုပ်သလဲ?
ငါကီးဘုတ်ကနေဘယ်လို copy paste လုပ်သလဲ? CTRL + Insert မြှားတို့ကိုသော့ကို Ctrl + c ကို = မိတ္တူကူးဒီဆည်းကပ်ထည့်သွင်းရန်ထည့်သွင်း + ရှင်းရှင်းဖျက်ဆီးခြင်းငှါ copy, ကို Ctrl + v = Stri + V ကူးယူ Stri + C ကို paste Stri + ကူးယူ Stri + C ကို paste ...
အဆိုပါကွန်ပျူတာသူ့ဟာသူ reboots လုပ်သွား။ အဘယ်သို့ပြုသနည်း
Laptop ကသူ့ဟာသူပြန်လည်စတင်သွားတယ်။ ဘာလုပ်ရမလဲ ကွန်ပျူတာကိုယ်တိုင်ပြန်လည်စတင်လျှင် - ================================== 1) ကျွန်ုပ်၏ကွန်ပျူတာ --gt; Properties-gt; Optional-gt; Download and restore-gt;“ Automatic reboot Perform” ကိုမဖြုတ်ပါနောက်တစ်ကြိမ်ပြproblemsနာများနှင့်ကြုံတွေ့ရသောအခါသင်မြင်ရလိမ့်မည်။
ooak ဘာလဲ? ? ooak
ooak ဘာလဲ? ? ooak repainted ပုံသို့မဟုတ်တခြားအရုပ်ဒါမှမဟုတ်သာသီးသန့် ooak ဒီရှိမရှိ: perekrashinaya ကစားစရာသို့မဟုတ်ကစားစရာ svoimirukami ဥပမာ PIRIKRASHIVAYUT ဖန်ဆင်းထားသည်: lps နဂါး hi ...
oshibka-6ဂိမ်းများကို install လုပ်သည့်အခါ
အမှား -6သည်ဂိမ်းဗိုင်းရပ်စ်နှိမ်နင်းရေးဆော့ဝဲလ်ကိုထည့်သွင်းသောအခါ Unarc.dll ကိုသွင်းပြီးမှတ်ပုံတင်ပါ။ အချို့သော operating system များတွင်ပျောက်ဆုံးနေသည်။ အဲဒါကိုရေးထားရင်လည်းမှားယွင်းစွာဖြည် ချ၍ ဖွင့်နေစဉ်တွင်အမှားတစ်ခုဖြစ်ပွားခဲ့သည် ... ငါမဖြစ်နိုင်ဘူး။
image ကိုကနေစာသား Remove
တံဆိပ်ခေါင်းဖယ်ရှားသောပုံရိပ်ကနေစာသားဖယ်ရှားပါ။ မနေ့ကအလားတူတောင်းလေ၏။ ငါတစ်နေ့လျှင်ရှုပ်ထွေး 2002votemarkov ၏အပိုငျးပိုငျးထားတော်မူ၏။ အဆိုပါကမ္ပည်းကြီးမားသည်ဆိုပါက Photoshop ကိုသာ, ကဒါပုံကို arc ယူဖို့ပိုပြီးလွယ်ကူသည် ...
တဦးတည်းစာရွက်ပေါ်တစ်စားပွဲရှည် print ထုတ်မှ Excel, နဲ့ဖြစ်နိုင်ရင်ကြီးမားတဲ့ဖောင်နှင့်အတူဖို့ဘယ်လိုနေသလဲ?
တဦးတည်းစာရွက်ပေါ်တစ်စားပွဲရှည် print ထုတ်မှ Excel, နဲ့ဖြစ်နိုင်ရင်ကြီးမားတဲ့ဖောင်နှင့်အတူဖို့ဘယ်လိုနေသလဲ? ဗီဒီယိုကိုတုံ့ပြန်မှု: https://youtu.be/BjPDABzgG3Y ဘယ်လိုအစီအစဉ်ကို Excel ကိုအစီအစဉ်တဦးတည်းစာရွက် features တွေအပေါ် print ထုတ်မှစားပွဲပေါ်မှာ Excel ရန်သင့်အား print ထုတ်ခွင့်ပြု ...
သငျသညျဖိုင်တစ်ဖိုင် EMF ဖွင့်လှစ် ?? အဘယ်အရာကို program တစ်ခုကဖန်တီး?
သငျသညျဖိုင်တစ်ဖိုင် EMF ဖွင့်လှစ် ?? အဘယ်အရာကို program တစ်ခုကဖန်တီး? EMF (မိုက်ကရိုဆော့ဖ Enhanced Metafile) ကို WMF ပုံစံတစ်ခု updated version ကိုဖြစ်ပါတယ်။ Microsoft ရဲ့အစီအစဉ်အရသိရသည်ပေးသောဤ metafile, အ WMF format နဲ့အစားထိုးဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာဖြစ်ပါတယ် ...
access ကို။ SELECT ။ ဖြင့်။ ။
access ကို။ SELECT ။ ဖြင့်။ ။ (နည်းပါးလာအက္ခရာများရေးသားဖို့တစ်ချိန်ကမှာအများအပြားစားပွဲမှကြီးမားသောမေးမြန်းချက်အတွက်အသုံးဝင်သော) ရယူကြောင်း XS နှင့်စားပွဲများအတွက်အစုံနာမည်အဖြစ် mysql ...
ဘား-line ကိုရိုက်ထုတ်သောမေးလ်စာအိတ်အဖြစ်, သမ်မာကမျြးများအတွက် font ကိုသငျသညျအဘယျသို့မခေါ်ကြဘူး။
ဘား-line ကိုရိုက်ထုတ်သောမေးလ်စာအိတ်အဖြစ်, သမ်မာကမျြးများအတွက် font ကိုသငျသညျအဘယျသို့မခေါ်ကြဘူး။ တချို့စာလုံးတွေရှိပါတယ်။ ငါသည်ချက်ခြင်း http://www.free-fonts-ttf.org/true-type-fonts/postindex-5358-download.htm အောက်မေ့တော်မူ၏။ ? တစ်ဇစ်ကို http အဖြစ်စိတ်ဝင်စားဖို့ font ကိုလည်းမရှိအဖြစ်: //www.photoshop-master.ru/adds.php ပွတ် = 17id = 2011 ...
A3 နှုတ်ကပတ်တော်ကို format နဲ့ထားရန်ဘယ်လိုနေသလဲ?
နှုတ်ကပတ်တော်၌ A3 ပုံစံကိုမည်သို့ထားရမည်နည်း။ Word 2007 (ထိုနေရာတွင် A3 ရှိသည်) ကိုသင်ထည့်နိုင်သည်၊ စာမျက်နှာမျက်နှာပြင်များ - စက္ကူအရွယ်အစား - (စင်တီမီတာ) ပေါ်လာစာရင်း၏အရွယ်အစား - ... သတ်မှတ်နိုင်သည်။
တစ်အွန်လိုင်းစတိုးကိုဖန်တီးရန်မည်သို့မည်ပုံငါကအင်တာနက် prodovat အကောင့်မှတဆင့်ချင် !!! အကောင့် !!
တစ်အွန်လိုင်းစတိုးကိုဖန်တီးရန်မည်သို့မည်ပုံငါကအင်တာနက် prodovat အကောင့်မှတဆင့်ချင် !!! အကောင့် !! တစ်အွန်လိုင်းစတိုးတစ်ခုဖန်တီး Click vmarkete.net ဝက်ဘ်ဆိုက်သို့သွားပြီး, ပုံစံဖြည့်အပေါင်းတို့နှင့်တကွ, သငျသညျအခမဲ့များအတွက်အဆင်သင့်အွန်လိုင်းစတိုးရှိသည်! ...
www ထဲကနေ Non-www site ကိုမှတစ်ဦး redirect လုပ်ပေးခြင်းတက်ချိန်ညှိခြင်း
www မှ www မပါ ၀ င်သောဆိုက်တစ်ခုသို့ redirect တစ်ခုတည်ဆောက်ခြင်းဟုတ်ကဲ့ဤအရာအားလုံးသည်အနတ္တဖြစ်သည်။ ပုံမှန်ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်အားလုံးသည်ရှေ့ဆက်နှင့်အတူသို့မဟုတ်မပါဘဲ - ရွေးချယ်ရန်တစ်ခုတည်းကိုသာရည်ညွှန်းသည်မှာကြာခဲ့ပြီဖြစ်သည်။ ဒုတိယ ...
သငျသညျကုမ္ပဏီ AOC စောင့်ကြည့်မဝယ်သင့်သလော က IPS matrix ကိုအမျိုးအစား။ ငါကဲ့သို့သောကုမ္ပဏီများအတစ်ခါမှမတွေ့ဖူးဘူး။
သငျသညျကုမ္ပဏီ AOC စောင့်ကြည့်မဝယ်သင့်သလော က IPS matrix ကိုအမျိုးအစား။ ငါကဲ့သို့သောကုမ္ပဏီများအတစ်ခါမှမတွေ့ဖူးဘူး။ တန်ဖိုးရှိ, ဟောင်းကုမ္ပဏီမော်နီတာရှည်ကိုထုတ်လုပ်ရုံရုရှားတွင် AOC တစ်ခုဖြစ်သည်အလွန်ရေပန်းစားမဟုတ်ပါဘူး ...
လူတွေဆိုက်အဘို့အဘယျကွောငျ့အ DB ဒေတာဘေ့စ? ကျေးဇူးပြုပြီးမိန်းကလေးငယ်များကိုရှင်းပြပါ။
လူတွေဘာကြောင့်ကွန်ရက်စာမျက်နှာတစ်ခုအတွက်ဒေတာဘေ့စ်ဒေတာဘေ့စ်တခုလိုအပ်တယ်။ ကျေးဇူးပြုပြီးမိန်းကလေးတွေကိုရှင်းပြပါ ဒေတာဘေ့စ်တစ်ခုသည်ဒေတာများကိုသိမ်းဆည်းရန်နှင့်ထိုနေရာမှလျှင်မြန်စွာပြန်လည်ရယူရန်အဆင်ပြေသောစားပွဲတစ်ခုဖြစ်သည်။ စားပွဲတွေမှာမင်းလုပ်နိုင်တယ် ...
စာမျက်နှာ 1 စာမျက်နှာ2... စာမျက်နှာ 25 Next ကို 's Page
14 အဆိုပါဒေတာဘေ့စဖို့ query လုပ်တဲ့အခါ, 0,302 စက္ကန့်ကျော် Generate ။